ICoinbase yethula iDogecoin ngemali eyizigidi ezingama- $ 1.2 njengoba amanani ehla
Coinbase ekugcineni yethule ukuhweba kweDogecoin.
Ukushintshisana kunikeza amaklayenti ama-dollar ayizigidi eziyizigidi eziyi-1,2 njengengxenye yokwethulwa
Ngaphambilini ngenyanga edlule, uBrian Armstrong, i-Coinbase CEO wadalula Inhloso yokushintshanisa ukufaka uhlu lwe-meme ethandwa kakhulu, i-Dogecoin. Lokhu kulandela ukuqhutshwa kwamuva kwempahla eyidijithali nokuthi okunye ukushintshana kuthole kanjani umkhawulo wokuncintisana kusuka kumthamo wayo omkhulu wokuhweba.
Ekuthuthukisweni kwakamuva, uCoinbase ubhale ngokusemthethweni iDogecoin. Njengengxenye yokwethulwa, uCoinbase unikeza amakhasimende imali engu- $ 1.2 million yezimpahla.
Kusukela ngoJuni 3, ukudluliswa kwangaphakathi kusuka eDoge kwavunyelwa kwaCoinbase Pr o. Ngokusho kweCoinbase , ukuhweba ngeDoge-USD, Doge-BTC, Doge-EUR, Doge-USDT neDoge-GBP kwethulwe ngezigaba ezintathu kusukela supply kwanele endaweni yesikhulumi. Izigabakuthunyelwe kuphela, kunqunyelwe kuphela futhi kuhweba ngokugcwele.
U-Armstrong ngaphambilini waveza ukuthi ukwengeza amafa kuyinto ehamba phambili kwiCoinbase. Ngalesi sizathu, balwela ukusheshisa ijubane lokufakwa kuhlu kwempahla endaweni yesikhulumi. Uvumile ukuthi kuthathe isikhashana ukuhambisana nezimpahla eziningi ezingezwa nsuku zonke emnothweni we-crypto.
Ungangena kanjani emncintiswaneni
Ukuze ube nethuba lokuwina, ababambiqhaza kumele baqale bathenge noma bathengise okungenani ama- $ 100 eDogecoin eCoinbase ngaphambi kukaJuni 6 2021. I owinile kuqala uzothola ama- $ 300,000 kwaDoge. Ngaphezu kwalokho, abanye abawinile abayishumi bazothola ngamunye u- $ 30,000 kwaDoge, bese kuthi abawinile abangu-6,000 nabo bathole ama- $ 100 kwaDoge ngamunye. Abaphumelele bazothintwa kusukela ngoJuni 17. Umncintiswano unqunyelwe ukungena okukodwa kumuntu ngamunye. Ukufakwa okuningi ngeke kukhuphule amathuba okuwina ngokusho kweCoinbase.e isebenze Coinbase.com.
Dogecoin intengo yokusabela
Njengoba bekulindelekile, isimemezelo sidale imizwa emihle emakethe, siphoqa inani laya phezulu ku- $ 0.42 ngaphezulu kwama-24 amahora. Kodwa-ke, intengo yehle ngo-13% kusuka ekuphakameni kwayo kwansuku zonke ukuhweba ngo- $ 0.36. Abanye abatshalizimali basasebenza kuDoge.
Umthamo wokuhweba uhlala phansi ngama-28% emahoreni angama-24 edlule ngokubusa kwemakethe okungu-2.8%.